समाचार - गैर बुनेका उपकरणहरूको फाइदा?
गैर बुनेका उपकरणका फाइदाहरू?
धेरै उत्पादनहरू गैर बुनेका कपडाहरू प्रयोग गर्दछन्, जस्तै बच्चाहरू द्वारा प्रयोग गरिएको डायपर, र वस्त्र उत्पादनहरू जस्तै मास्कहरू। गैर बुने कपडाका धेरै फाइदाहरू छन्। यो राम्रो हावा पारगम्यता र राम्रो पानी अवशोषण समारोह छ। त्यसकारण गैर बुनेका कपडाहरू क्षेत्रको विस्तृत श्रृंखलामा प्रयोग गरिन्छ। जे होस्, सम्पादकको सीमित ज्ञानको कारणले, हामीलाई थाहा भएको ज्ञान तुलनात्मक रूपमा सानो छ। गैर बुनेका उपकरण गैर-बुनेका कपडाहरू उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने मेशिन हो, त्यसोभए उत्पादनको लागि गैर बुनेका उपकरण प्रयोग गर्दा के फाइदा हुन्छन्? तपाईं आफ्नो शंकाको जवाफ दिनको लागि निम्न परिचय पढ्न सम्पादकलाई अनुसरण गर्न सक्नुहुनेछ।
१. गैर बुनेका उपकरणहरूको सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रवाह पूर्ण रूपमा स्वचालित गर्न सकिन्छ, केवल १ देखि २ व्यक्तिहरू अपरेट गर्न आवश्यक छ, जसले सीमित श्रम बचत गर्न सक्दछ।
२. गैर बुने कपडा उपकरणले दायरा भित्र उत्पादन गति र उत्पादन आकार समायोजन गर्न सक्दछ। गैर बुनेका कपडा उपकरणले टच स्क्रिन अपरेसन प्रयोग गर्दछ, स्टेपिंग प्रकार निश्चित लम्बाई, फोटोइलेक्ट्रिक ट्र्याकिंग, स्वचालित गणना र स्वचालित पंचिंग र अन्य औद्योगिक नियन्त्रण उपकरणहरू, जुन अपरेट गर्न सजिलो हुन्छ।
Non. गैर बुनेका उपकरणहरूको उर्जा बचत प्रभावलाई थप बुझ्नको लागि, गैर-बुनेका उपकरणहरूले अतिरिक्त बुनेका उपकरणहरूको उत्पादन प्रक्रियाको अवधिमा प्रशारण सामग्रीहरूको रिसाइकल गर्ने कार्य गर्दछ, र स्वचालित रूपमा उत्पादन प्रक्रियामा बाँकी अपशिष्ट सlects्कलन गर्दछ। , जो माध्यमिक उपयोगको लागि उपयोगी छ र श्रमको तीव्रता कम गर्दछ। कार्य दक्षता बढेको। फोहोर पदार्थको पुनःप्राप्तिले संसाधन मात्र सुरक्षित गर्दैन, तर वातावरणमा पनि राम्रो सुरक्षात्मक प्रभाव पार्छ।
गैर बुनेका कपडाहरूको अघिल्लो म्यानुअल उत्पादनको तुलनामा, गैर बुनेका कपडाहरूको उत्पादन गर्न गैर बुनेका उपकरणहरूको प्रयोगले उत्पादनको गति द्रुत बनाउन सक्छ; एकै समयमा, गैर बुनेका उपकरणहरू चलाउनको लागि सरल छ र निर्मातालाई अपरेट गर्न थप टेक्निकल कर्मीहरू भाँडा लिन आवश्यक पर्दैन; गैर बुनेका उपकरणहरू यसले दिगो विकासको आवश्यकताहरूको पनि अनुपालन गर्दछ र वातावरण संरक्षणको सिद्धान्तको पालना गर्दछ। यी गैर बुनेका उपकरणका फाइदाहरू हुन् र वर्णन गर्नुहोस् किन गैर बुनेका उपकरणहरू बजारमा मनपर्दछ। त्यहाँ गैर-बुनेका उपकरणका धेरै ब्रान्डहरू छन्। उत्पादनमा भिन्नताका कारण गैर-बुनेका उपकरण उत्पादकहरूको विभिन्न ब्रान्डले गैर बुनेका उपकरणहरूको प्रयोगमा फरक प्रभाव पार्छ। तपाईं खरीद गर्नु अघि गैर-बुनेको उपकरण प्रयोगको अनुभव जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।